I-Prague yinhliziyo yaseYurophu. Leli dolobha lihlaselwa yinqwaba yezikhumbuzo zezakhiwo - izinqaba, izindlu zaseGothic nezakhiwo zasendulo. Uma ungazi ukuthi imuphi umfula ePrague kubhekwa njengendlela ebaluleke kakhulu emanzini, ngakho-ke lesi sihloko senu. Inhloko-dolobha yaseCzech igxile emabhange amabili omfula uVltava ovelele. Ngentela, izizwe eziseningizimu zaqala ukuhlala kule ndawo ngenxa yokuthi zazizwa amandla amanga avela emanzini. Kusukela olimini lwase-Old German igama leVltava lihunyushwe ngokuthi "umfula osendle (onolaka)". Ukukhulunywa kokuqala kwebhula kungatholakala emibhalweni yeminyaka engu-872.
Lo mfula ePrague uthathwa njengenye yezinto ezikhangayo. I-Vltava ingumfula ohamba ngomkhumbi, lapho izikebhe zokuthutha kanye nemikhumbi yempahla ehamba ngayo. Amakhulu ezokuvakasha nsuku zonke aya kuhambo lokubona indawo ngasemfuleni. Ngendlela, leli gumbi libhekwa njengomfula ode kunayo yonke e- Czech Republic. I-Vltava igeleza kusukela eningizimu kuya enyakatho. Igeleza i-Elbe, ewela eJalimane futhi ifinyelele eNyakatho YaseLwandle. Ubude bayo buyi-446 km.
Umfula ePrague udlala indima yombango ohlukanisa umuzi ezindaweni ezingasentshonalanga nasempumalanga. I-Vltava igeleza ngenye ingxenye yomlando enhle kunayo yonke yenhloko-dolobha yaseCzech. Ngaphezu kwePrague, kulo mfula kunamanye amadolobha amabili - uCesky Krumlov noCeske Budejovice.
Ibanga elifushane phakathi kwamagquma alo lingamamitha angu-40, kanti elikhulu kunawo wonke ngamamitha angama-330 (eduze kweDamkovskaya dam phakathi nenhloko-dolobha). Ukugeleza ngaphakathi kwendlunkulu kunobuso obuhle futhi buthule.
Ngaphansi kwedamu kwakhiwa isiqhingi, esibizwa ngokuthi iSlovenia. Eceleni kwalo itholakala okunye okunye - I-Streletsky. Kuphelele kukhona iziqhingi eziyi-10 ku-Vltava. Lo mfula omkhulu ePrague unemifudlana engu-10 kusuka ebhange elingakwesokunxele kanye no-14 ukusuka kwesokudla.
Amakhulu amaningi eminyaka yeVltava yamaCzech awona nje umfula, kodwa ingcebo kazwelonke. Ukuba khona kwakhe kwaba nomphumela omuhle ekuthuthukiseni inhloko-dolobha kanye nezwe lonke. Izikhathi eziningana lo mfula waphuma emabhange, bathi izikhukhula ezinamandla lapha zikhonjisiwe ngekhulu le-XV. Ngo-2002 i-Vltava iphinda ishiya ogwini. Lesi sikhukhula siphelile kakhulu kunazo zonke eminyakeni edlule engu-500. Ngenxa yengozi, i- Prague ngaphansi komhlaba kanye nengxenye ebalulekile yesikhungo somuzi yahlupheka.
Ekhulwini le-12, ibhuloho lokuqala lamatshe , elibizwa ngokuthi uJudith, lakhiwa, laliyizingalo zamamitha angu-500 nobubanzi obuyizingalo eziyisikhombisa. Ngekhulu le-14 yatshintshwa futhi yaqanjwa ngokuthi iKarlov. Lesi sakhiwo sikhonywe ngamaqembu angama-30 aqoshiwe nezithombe eziqoshiwe.
Okuphakeme kakhulu iBridge Bridge. Ubude bayo buyizingamamitha angu-485, futhi ukuphakama ngamamitha angu-40. Ixhuma emagqumeni amabili asePrague futhi ibukeka sengathi igoqwe phezu komfula. Isakhiwo esihle kakhulu sesitimela yi-viaduct yaseKarinsky, eyakhiwa ngo-1850. Iqukethe ama-arches angu-85, nobude bayo bungaphezu kwekhilomitha. Ngokuvamile kukhona amabhuloho angu-15 emfuleni.
Izindawo ezinhle kakhulu
Manje uyazi ukuthi umfula ePrague ubizwa ngani, kodwa ngokuqinisekile awukazanga ukuthi indawo yiphi indawo enomusa kakhulu kulesi echibini. Kukholelwa ukuthi ingxenye enhle kunazo zonke yeVltava ingumkhono wayo, obizwa ngokuthi uDeveli. Ihlukanisa isiqhingi saseKampa kusukela engxenyeni yomlando ePrague - Idolobha elincane, eliseceleni kwesobunxele lomfula. Ezikhathini ezedlule, amanzi avela kulokhu ayesebenzisa izindlu, izindlu kanye namafektri.
Ungase futhi uthande isondo elikhulu elinamapulangwe lenye yezimayini zakudala zedolobha, elizungezwe ezinye izakhiwo zomlando ezingajwayelekile. Le ndawo ibizwa nangokuthi iPrague yaseVenice.
I-Vltava inikeza idolobha uthando oluyingqayizivele nokuthandana. Umfula omuhle wasePrague waxhuma izenzakalo zabantu kanye nezwe ngomlando omdala weCzech Republic.
Kungani isidingo on-ebhodini ikhompyutha ku "Kalina" futhi yini inzuzo yayo?